अरूणखाेलामा डाइभर्सन निर्माण गरी यातायात सुचारू
काठमाडौँ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासीको अरुणखोला पुल भाँचिदा रोकिएका सवारी साधनलाई वैकल्पिक बाटो (डाइभर्सन) निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
भाँचिएको पुल मर्मतका लागि भने केही समय लाग्ने प्रहरी निरीक्षक अधिकारीले बताउनुभयो । पुलको तल्लो सतहबाटै मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल पूर्णरूपमा पुलबाट यातायात सञ्चालन गर्न केही समय लाग्ने सडक डिभिजन कार्यालयले जानकारी गराएको उनले बताए ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डअन्तर्गत नवलपरासीमा रहेका पुलहरु झण्डै वर्षेनीजस्तो कुनै न कुनैमा क्षति पुग्ने गरेका छन् । यसबाट यात्रुहरुले समस्या झेल्ने गरेका छन् ।
नवलपरासीको नवलपुरअन्तर्गत पर्ने जयश्री पुल, बौलाहाखोला पुल, लोकाहा पुलमा गत वर्ष सवारीले ठक्कर दिई क्षति पुग्दा महीनौँसम्म यात्रुले सास्ती पाएका थिए ।
वि.सं. २०३० तिर निर्माण गरिएका नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डका पुलको संरचनामा ‘ट्रस’को प्रयोग गरिएको छ । पुल निर्माण गरेको लामो समय भएकाले पुलका संरचना कमजोर बन्दै गएका छन् । सवारीसाधनले पुलमा सामान्य ठक्कर दिँदासमेत पुलको संरचनामा धेरै क्षति पुग्ने गरेको छ ।
एजेन्सीको सहयोगमा । किड्नीको सामान्य काममा असर हुनु किड्नी फेल हो । किड्नी फेलका धेरै कारण हुन्छन् । कहिलेकाही किड्नीमा चोट लागेर पनि किड्नी फेल हुन्छ । त्यस्तै न्यून रक्तचाप, शल्यक्रियाको साइड इफेक्ट
कंगनाको ‘पंगा’ले पहिलो दिन कति कमायो ?
काठमाडौं । अभिनेत्री कंगना रनौत, ऋचा चढ्ढा र जस्सी गिल स्टारर् फिल्म ‘पंगा’ शुक्रबारबाट दर्शकमाझ रिलिजमा आइसकेको छ । नेशनल कबड्डी प्लेयरको जिवनीमा आधारित ‘पंगा’लाई दर्शकहरुले रुचाइरहेका छन् ।
‘पंगा’ अभिनेत्री कंगनाको लेटेस्ट तस्बिर चर्चामा
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावत र जस्सी गिल स्टारर फिल्म ‘पंगा’ शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको छ । फिल्मको प्रमोशन गर्न कंगना निकै मिहिनेत गरिन् । हालसालै फिल्म प्रमोशनका लागि विभिन्न स्थानमा पुगेक